Marketing marketing: tantara, fivoarana ary ho avy | Martech Zone
Marketing amin'ny Influencer: Tantara, Evolisiona ary ny ho avy
Alakamisy, Aogositra 10, 2017 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Brian Wallace
Mpanafatra ny haino aman-jery sosialy: zavatra tena izy ve izany? Koa satria ny media sosialy no lasa fomba fampiasa amin'ny fifandraisana amin'ny olona maro tamin'ny 2004, maro amintsika no tsy afaka mieritreritra ny fiainantsika raha tsy misy an'io. Ny zavatra iray izay nanova ny haino aman-jery sosialy ho tsara kokoa dia ny nanala demokrasia azy hoe iza no lasa malaza, na farafaharatsiny fanta-daza.
Hatramin'izao dia tsy maintsy niantehitra tamin'ny sarimihetsika, magazine ary fandaharana amin'ny fahitalavitra izahay mba hilazana aminay hoe iza no malaza. Ankehitriny ny olona dia afaka mampiasa media sosialy mba hahafantarana azy amin'ny sehatra mahaliana azy. Raha te ho tonga malaza amin'ny Internet ho an'ny tutorial momba ny makiazy, misy vondrom-piarahamonina amin'izany!
Midika koa izany fa afaka mivelona amin'ny fampiasana media sosialy izao ny olona. Azonao atao ny manangana manaraka ao anatin'ny vondrom-piarahamonina iray, ho lasa fanta-daza amin'ny fahalalanao fahalalana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina voalaza, ary avy eo manokatra ny tenanao amin'ireo fotoana mety hitranga any amin'ireo lahatsoratra misy ny influencer.
Ity fomba fiaina ity dia tsy hoe tsy misy fitsipika, na dia eo aza ny zava-misy dia orinasa vaovao io. Ny FCC dia te-hahazo antoka fa fantatry ny olona fa mijery doka izy ireo, ka izany no hahitanao matetika Content Contenu niparitaka tamin'ny lahatsoratra bilaogy na #ad tamin'ny lahatsoratra Instagram.
Na eo aza izany, ny olona dia mazàna mahita ireo mpiorina amin'ny haino aman-jery sosialy azo itokisana kokoa noho ny mpitondra tenin'ny olo-malaza karama - 70% amin'ny tanora no milaza fa ny Youtubers dia azo oharina kokoa noho ny olo-malaza, raha 88% kosa ny olona matoky ny tolo-kevitra an-tserasera toy izay azony amin'ny fianakaviany sy ny namany.
Raha hanonona an'i Seth Godin, ny olona dia afaka "mamofona ny fandaharam-potoanan'ny mpitondra". Tsy dia marina loatra izany raha ny resaka marketing influencer. Mba hitazonana ireo mpankafy tsy mivadika aminy dia tsy maintsy tianao sy inoanao izay ekenao. Mari Smith notononin'i John White, Ahoana no nanakorontanan'ny dokotera mpampihorohoro toa an'i Lilly Singh sy Andrew Bachelor tamin'ny fanaovana doka
Mianara bebe kokoa momba ny ny fivoaran'ny influencer avy amin'ity sary ity!
Tags: masoivohomarika ambasaderafaneken'ny olo-malazany fivoaran'ny influencerhery miasa manginamarketing marketingSary torohayireo mpamaky media sosialyvotoaty voohanainfluencers youtube
Brian Wallace no filohan'i NowSourcing, indostria mitarika masoivoho famolavolana infographic monina any Louisville, Ky. ary miasa amin'ireo orinasa manomboka amin'ny orinasa kely ka hatramin'ny Fortune 500. Brian koa dia mitarika hetsika eo an-toerana mba hahatonga an'i Louisville ho tanàna iray mifaninana kokoa (#thinkbig) ary voatendry ho mpanolotsaina Google Small Business 2017.
Amin'ny volana oktobra 2017, mila manana mari-pahaizana SSL mangarahara ianao